မြန်မာပြည်က ငတုံးတွေအတွက် အထူးသင်တန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာပြည်က ငတုံးတွေအတွက် အထူးသင်တန်း
မြန်မာပြည်က ငတုံးတွေအတွက် အထူးသင်တန်း
Posted by phone_kyaw on Dec 23, 2011 in Copy/Paste | 30 comments
ဖြစ်နေတယ်။ အန်အယ်ဒီကလည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိမ်မဲခိုးမဖြစ်အောင် သင်တန်းတွေပေးပါဆိုပြီး ၈၈-မျိုးဆက်အတုလား အစစ်လားမသိတဲ့အဖွဲ့ ကို ညွန်ကြားနေတယ်။ တခြားအဖွဲ့ တွေကလည်း လက်ရှိအခင်းအကျင်းကို အားပေးတဲ့သင်တန်းတွေပေးနေတာကို တွေ့ နေရတယ်။ ပြည်ပမှာလည်း သင်တန်းတွေက မှိုလိုပေါက်နေတယ်။ ဘယ်သူမှ မလုပ်သေးတဲ့သင်တန်းတွေကို ကျနော်စဉ်းစားနေမိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုးတာက လူ့ အခွင့်အရေးကို နားမလည်တာပါ။ စစ်တပ်ထဲက ရဲဘော်တွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေ၊ အရပ်သားတွေကို လူ့ အခွင့်အရေးသင်တန်းတွေပေးလိုက်ရင် လူတွေကို အနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့ ကျောင်းတွေမှာ မှုလတန်းကစပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်ရေး၊ လူအချင်းချင်း သာတူညီမျှဖြစ်ရေး၊ အနဲဆုံးပါးစပ်နဲ့ တောင် နှိမ်ချတဲ့အသုံးအနှုံးကို မသုံးမိရေးတွေကို ဆရာမတွေက သင်ပေးတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးက ခလေးတွေဟာ လူကြီးဖြစ်လာတဲ့တနေ့ ကြရင် အလိုအလျှောက်ဆင်ခြင်ပြီးသားပြီနေပြီ။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ စစ်တပ်ထဲကလူတွေ၊ သူပုန်တွေထဲကလူတွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေ၊ အးလုံးသော လူတွေကို ဒီလိုသင်တန်းမျိုးတွေပေးသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ စစ်သားက ပညာမတက်၊ မတက်တော့ နားမလည်၊ မုဒိန်းလည်းကျင့်တာပဲ။ ခိုးချင်လည်းခိုးတာပဲ။ ရိုက်ချင်လည်း ရိုက်တာပဲ။ ဒါတွေဟာ အခွင့်အရေးနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမဲ့ဆိုတဲ့ အသိတရားမရှိလို့ ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒါတွေဆက်မဖြစ်အောင် အောက်ခြေမှာ သင်တန်းတွေများများပေးသင့်တယ်။ ဘုန်ကြီးတွေကိုလည်း တရားစာနဲ့ အတူ ဒီလိုသင်တန်းတွေပေးရမယ်။
ဒီရွာထဲမှာစာရေးစာဖတ်လုပ်တဲ့သူတွေ အားလုံးတောင် လူ့ အခွင့်အရေးကို နားလည်မယ်မထင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နဲနဲလေးမကြားဘူးတာတွေ့ ရင် ခွေးတွေလို ၀ိုင်းပြီး ကိုက်တက်ကြတယ်။ ဟောင်တက်ကြတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ရင် စစ်အစိုးရက ပြောတာမှန်တယ်ထင်တယ်။ မြန်မာတွေဟာ သူနဲ့ တန်တဲ့အစိုးရပဲ ရတယ်ဆိုတဲ့စကားပါ။
လူဆိုလျှင် လူလိုပြောတဲ့အခါ လူတိုင်းနားလည်တယ် … ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဘာသတ္တ၀ါမှန်းမသိအောင် … အာဝူး အာဝူး လုပ်နေပြီး … (((နဲနဲလေးမကြားဘူးတာတွေ့ ရင် ခွေးတွေလို ၀ိုင်းပြီး ကိုက်တက်ကြတယ်။ ဟောင်တက်ကြတယ်။ ))) တဲ့…
ဘာပါးစပ်က ဘာစကားထွက်သလဲ .. သိပ်တော့ မခိုင်းနှိုင်းပြချင်ဘူး … ခွေးသိက္ခာကျလွန်းလို့ … ။
စားဖို့တောင် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ အချိန် ၊ မင်းဂျီးတော်က ပိုက်ဆံပေးပြီး အခမဲ့သင်တန်းပေး ထမင်းကျွေးမှာ မို့လို့လားကွ ။ အဝေးကနေလှမ်းလှမ်း အူမနေနဲ့ တော်သလင်းလ မရောက်သေးဘူး ။
bk မင်းမိန်းမနဲ့သမီးကို ဖါတန်းပို့မယ့် သင်တန်းကိုတက်ခိုင်းပါလား သြစီ ဂေါင်း..
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတာကိုက မှားတာ
နောက်နောင် နာမည်ကြည့်ပြီးမှ ပို့စ်ဖတ်တော့မယ်..
ဟေ့လူ… ခင်ဗျားလို လူတစ်ယောက်က
သြစီဆိုတဲ့ နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံ ရောက်ပြီး
ကိုယ့်လက်ကိုတောင် ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းနေပြီဗျ..။
ရွာထဲမှာ နာမည်ကြီးချင်တယ်ဆိုလည်း အခြားနည်းတွေ
အများကြီးရှိသေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ တန်တဲ့
အစိုးရရတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားကကော သာယာဝတီသွေးစပ်တဲ့
မြန်မာမဟုတ်ဘူးလား… နိုင်ငံကြီးရောက်လို့ အရူးဘုံမြောက်ပြီး
မိုင်းတွင်းထဲက အတွေးတွေကို ချထားပြီး
မင်း ခေါင်းစဉ်ကို ပြင်သင့်တယ်..
မင်းစောက်မျိုးအိမ် မကြာခင် မီးလောင်တော့မယ်..မှတ်ထား..
အာဝူး ဝုတ် ဝုတ်….ဂိန်….. ငါတို့ရွာ အစိုးရမင်းက သဂျီးဦးခိုင်….
phone_kyaw says: [ ခွေးတွေလို ၀ိုင်းပြီး ကိုက်တက်ကြတယ်။ ဟောင်တက်ကြတယ်။ သူနဲ့ တန်တဲ့အစိုးရပဲ ရတယ်ဆိုတဲ့စကားပါ။]
အင်း.. ၀င်လာကြည့်မိတာ အဆဲခံရပြီ..။ လူလိမ္မာသား ယဉ်ပါးတယ်။ လူမိုက်သားက တယ်ရမ်းကားနေပါ့လားကွယ်..။ လူအခွင့်အရေးက အသာနေပါအုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လူစကားပြောတတ်အောင် ကျင့်လိုက်ပါအုံးဗျာ…။
Super ၀င်ကြည့်မိတာအမှားပဲဗျာ။ ကိုဘုန်းကျော်ရေ့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် သင်တန်းတက်ပြီး လူလိုဖြစ်အောင် ကျင့်လိုက်ပါဦး၊ သူများကို ပြောချင်ရင် ကိုယ့်ကိုကို ပြန်ကြည့်ရတယ်ဗျ၊ ကျွဲပါးစောင်းတီးဆိုတာ ခင်ဗျားလိုလူမျိုးတွေအတွက် ထားခဲ့တဲ့ စကားပုံပဲဗျ……..
ခွေးလိုကျင်.၊ ခွေးလိုဟောင် ၊ ခွေးလိုပြောပြီး …………
(ဆော၇ီး ခွေးတောင် သိက္ခာ ကျမယ်ထင်တယ် နှိုင်းလိုက်လို.)
“မြန်မာပြည်က ငတုံးတွေအတွက် အထူးသင်တန်း” and “လူအချင်းချင်း သာတူညီမျှဖြစ်ရေး၊ အနဲဆုံးပါးစပ်နဲ့ တောင် နှိမ်ချတဲ့အသုံးအနှုံးကို မသုံးမိရေးတွေကို ဆရာမတွေက သင်ပေးတယ်။”
ဘုန်းကျော်ရေးထားတာ နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရင် ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်တယ်ပြောရမယ်။
ခွေးတွေတော့သူတို့နှင့် နှိုင်းရမလား လို့ပြောကြတော့မှာပဲ။
မဖတ်ဖို့တော့ စဉ်းစားထားတာပဲဗျာ..ကွန်မန့်ဘောက်စ် မှာ မန့်ထားတာ တွေကြောင့် မနေနိုင်လွန်းလို့ပါ..
“..ဒီရွာထဲမှာစာရေးစာဖတ်လုပ်တဲ့သူတွေ “အားလုံး” တောင် လူ့ အခွင့်အရေးကို နားလည်မယ်မထင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နဲနဲလေးမကြားဘူးတာတွေ့ ရင် ခွေးတွေလို ၀ိုင်းပြီး ကိုက်တက်ကြတယ်။ ဟောင်တက်ကြတယ်။..”
သူကြီး ရေ..အများသူငါ အားလုံးကို သိမ်းကြုံးစော်ကား ထားတာ ရှင်းနေတယ်နော်..
ဖျက်သင့်တဲ့ အပြင် ရေးသူကိုလည်း ၀မ်နင် ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်..
ဒီလိုကောင်စားမျိုး ကရေးတဲ့စာ မှာ ယူစရာ မပါဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်..
ဒီကောင်ပြောနေတာတွေ ကို အားလုံးက ပြန်လှန်ပြောတတ်ကြ သူတွေချည်းပါ..
ဒါပေမဲ့ ပက်ပက်စက်စက် မမန့်ကြတာ သူကြီးရဲ့ ရွာကိုအလှမပျက်စေချင်ကြလို့ ဗျ…
ဒီတော့ ဗျာ လူနာမည် ယူထားပြီး ခွေးသရုပ်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ ကောင်ကို ရွာပြင်မြန်မြန် ထုတ်ရင် ကောင်းလိမ့်မယ်..
ဖတ်မိတာတောင် မှားသလို. ရွာသားတွေကို ပလိန်းကြီးဖိုက်နေပါလား အော် ပြသာသနာကို မီးထွန်းရှာနေပါရော.လား ခက်ပြီး စစ်တပ်ထည်.က ပဲဟင်း ၀အောင် မစားခဲ.ရလို. လား မသိ….
အခုတော. သြစီမှာ တီရှာပြီး သူများမျက်နှာ ကြည်းစားနေရတည်းဘ၀ကများးးး ဟင်းဆက်ပြောရင် ပါလာမယ် ဒေါသ
ဒီလူ ဗျာခွေးပါးစပ်ကနတ်စကားထွက်လို့ ။ရှက်တတ်သေးရဲ့ လားမသိပါဘူး။
ဒီမယ် ကိုဘုန်းကျော် ခင်များပြောတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာက လုရတဲ့အခွင့်
အရေးမျိုးလား၊ခင်များကိုယ်တိုင်ရော နားလည်ရဲ့ လား။ပြောတော့သိပ်မပြော
ချင်ဘူး။ခင်များသတ္တိရှိရင် တိုင်းပြည်ထဲဝင်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါလား။လရောင်မြင်တိုင်း
ဟောင်မနေနဲ့ ။ခင်များကြောင့် အိပ်ရေးပျက်တယ်ကွာ။
ဆရာသစ်မင်း။မှော်ဆရာ ။ whowho ။ashinthusitta ။ ဘုန်းဘုန်းဆန်နီနေမင်း တို့ရဲ့ စာများ ဖတ်ပြီး အလကား အဖြစ်မခံကြပါနဲ့။ အသုံးချနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ကြပါ။အားလုံး စိတ်အေးချမ်းပါတယ်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ရွာထဲဝင်လိုက်တိုင်း ဒီမသာကြောင့် ဒေါသထွက်ရတယ်။
ဟေ့ကောင် အောက်လမ်းက ၀င်ပြီး ချီးတူးနေတဲ့ကောင်
ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ စောက်ဖြစ်မရှိရင် မပြောနဲ့။
အင်း…လူလိမ်မာသား ရင်ပါးတဲ့..လူမိုက်သားရမ်းကား…သူအဖေ တပ်ကြီးဆိုတော့….
phone_kyaw ကောင်လေးရဲ့…….. ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ…. ခင်ဗျားလည်း အရွယ်ရောက်ပြီးသား ချင့်ချိန်တတ်သူတစ်ယောက်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်.. ပြီးတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားတွေမှာလည်း ကျင်လည်ခဲ့ဘူးတော့ ဘဝမှာ ကောင်းသော မကောင်းသော အတွေ့ အကြုံတွေအရမ်းရခဲ့မှာဘဲ.. ယုတ်စွအဆုံး အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲက အကြောင်းမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ် ပို့ စ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ရင် သြော်ဇီ မရောက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ လိုသူတွေ၊ ခင်ဗျားရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ချိုမြိန်/ခါးသီးအတွေ့ အကြုံမျိုးလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ Share ပေးနိုင်ရင် ဖတ်ရသူအပေါင်းလည်း ခင်ဗျားအပေါ်အရမ်းလေးစား ကျေးဇူးတင်ကြမှာပါ.. ကောင်းသောအနေနဲ့ ကျွန်တော် အကြံဥာဏ်ပေးလို တာကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် သူများအမြင်စောင်းစေမယ့် အပြောမျိုး ရှောင်ပါလို့အနူးအညွတ် တိုက်တွန်းပါရစေ.. ကိုယ့်ဖက်က အမှန်ထင်ပေမယ့် အများကလည်း တစ်မျိုးမြင်နိုင်တာကြောင့် အရာရာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပါလို့ထပ်လောင်းပြောပါရစေ.. ခင်ဗျားရဲ့ပို့ စ်ကောင်းကောင်းလေးတွေကို မျှော်နေမယ်ဗျာ.. I wish Merry Christmas and Happy New Year For You and Your Family.
(ထပ်လောင်းပြောချင်တာက ကိုခိုင် အနေနဲ့ဒီလို လူမျိုးကို မကြိုက်ရင် အကောင့်ပိတ်လို့ ရပေမယ့် ကိုဘုန်းကျော် တစ်နေ့ ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ထားပုံရတာကြောင့် မလုပ်ခဲ့ဘူး.. လေးစားပါတယ် ကိုခိုင်)
အကောင်းဆုံးကတော့ ဒီကောင်စာတွေမဖတ်ပါနဲ့ ၇ူးနေတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါ
Zay ပြောသလိုပါပဲ .. သူဘယ်လောက်ရေးရေး ကျွန်မတို့တွေ သူ့စာမဖတ်ဘူး .. ကော့မန့် မပေးဘူးဆိုလျှင် … ကြာလာလျှင် ငြိမ်သွားမှာပါပဲ … ။
ဒီတော့ နောက်ပိုင်းစာတွေ ၊ ရေးချင်သလောက်ရေးပါစေ ..ရေးတဲ့ လူ … သူဆိုလျှင်တော့ .. ဘာမှကို မဖတ်ပဲထားတာ အကုသိုလ်တက်ရသက်သာပါတယ် … ။
မဟုတ်လျှင် .. ကိုယ်တွေက ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ ကော့မန့်ရေးတိုင်း သူ့ကို ပွိုင့်တိုးအောင် လုပ်လုပ်ပေးနေသလိုပဲ … ။ ဟွန်း
အထက်က ကွန်မန့် ရှင်တွေ….
ဖုန်းကျော့်ပတ်သမျှ လှည့်သမျှ အရူးဇာတ်ကွက်တွေမှာ လိုက်ကနေကြပါပကော!!!
နယ်စပ်မှာ ကြမ်းခဲ့ ရမ်းခဲ့ တဲ့ကိုဖုန်းကျော်လည်း တောင်ခြမ်းမှာ ရာမပြတ်နေတယ် ထင်တယ်။
တောက်!!!! ငါလည်း ဒီအရူးဇာတ်မှာ အပျင်းဆန့် မိလို့ဟိုတစ်ယောက်က ပွိုင့် တွေတိုးပြီး
ကိုမှော်ဆရာနဲ့ – သဂျီးရေ-
တုတ်ကောက်နဲ့ နှာခေါင်းကို လိုက်ရိုက်နေပါပြီဗျ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ထွက်ပြေးရမှာလား ။ ပြန်ကိုက် အဲလေ…ပြန်ရိုက်ရမှာလား။
ဘယ်လိုမှ မပြောကြပါနှင့် သူ့စရိတ်နဲ့ သူသွားမှာပါ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုဆိုတာ ရှီပါတယ်
post မဖတ်ပါ… Comment များသာဖတ်သွားပါတယ်..။
ဟာဟ.. အရူးကြီးပါလား.. နာမည်ကြီးချင်နေလို့ ထွင်နေတာပါ..